Accueil > Gazetin'ny nosy > Antenimierampierenena : Nanohana ny IRD hatramin’ny TIM
Antenimierampierenena : Nanohana ny IRD hatramin’ny TIM
Nanomboka nivory amin’ilay antsoina hoe “fivoriana manokana” (session spéciale) omaly ireo solombava mandrafitra ny Antenimierampirenena vaovao. Araka izany maha-fivoriana manokana azy izany, izay voasoritra ny Lalàmpanorenana ny vontoatiny, dia ny fananganana ny mpikambana ao amin’ny birao maharitra. Raha ilaina moa dia ao anatin’izao fivoriana manokana izao koa no hanitsiana na handrafetana fitsipika anatiny vaovao.
Efa hariva ihany omaly vao tafiditra tao anatin’ny fifidianana izay ho filoha mpitarika indray ny Antenimierampirenena mandritra ny 5 taona vaovao ny solombava. Kandida tokana no nirotsaka, dia Rtoa Razanamahasoa Christine, avy amin’ny vondron-kery “IRD”, ary voafidy tany amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana.
Talohan’ny nirosoan-dRazanamahasoa Christine namelabelatra ny antonantony nandrisika azy hiroso amin’izao andraikitra maha-lehiben’andrim-panjakana mpanao lalàna izao dia samy nandray fitenenana ireo solontenan’ny ankolafin-kery pôlitika mandrafitra ny Antenimierampirenena. Teo ireo avy amin’ny antoko pôlitika toa an’i Voninahitsy Jean Eugène. Teo ny avy amin’ny tsy miankina izay efa nanambara fa hiara-dia amin’ny “IRD”, teo ny avy amin’ny tsy miankina izay mbola mitana ny maha-tsy miankina, tsy momba ny fitondrana 100% nefa tsy hanohitra ny fitondrana koa. Izy rehetra ireo dia samy nilaza fa “rariny sy hitsiny raha omena an-dRtoa Razanamahasoa Christine ny toerana, satria ankoatra ny maha-tokana azy amin’izao firotsahana izao dia mpahay lalàna izy ary vehivavy zary endrika ny fampiraisana”.
Fa isan’ny nandrasan’ny maro ny hevitra avy amin’ny vondron-kery Tim omaly. Nijoro nitondra ny tenin’ny solombava Tim ny Me Razafimanantsoa Hanitra. Izahay, hoy izy, dia manamafy amin’ny maha-mpanohitra ny fitondrana ankehitriny anay saingy marihinay fa mpanohitra ao anatin’ny ara-dalàna izahay. Etsy ankilany, ny raharahan’ny Antenimierampirenena dia iarahantsika mahafantatra, hoy ihany ny Solombava Hanitra Razafimanantsoa, fa mitaky fanarenana ankapobeny, na toe-tsaina na fomba fiasa na fifanajana, na fanarahan-dalàna sy ny sisa. Samy nilokaloka isika, hoy ihany ity solombava voafidy tao amin’ny boriboritany Antananarivo voalohany ity fa hanarina ny hasin’ny Antenimierampirenena, ka ho anay dia tsy ho volo hanoa randrana ny amin’izany izahay, ary vao mainka hitaona ny namanay hifidy ny solombava Razanamahasoa Christine raha toa ka manome antoka izy fa hanaja ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra eto, indrindra fa ny hevitry ny mpanohitra. Fomba fiteny nentiny nanehoana ny fahavononan’ny solombava TIM hifidy azy izany na dia nanaovany fanamarihana aza, ohatra, ny hoe “tsy maintsy hiteny sy hanohitra ny tsy mety izahay fa hihoby ny mahasoa ny firenena kosa”.
Rehefa nadray fitenenana moa ny kandida Razanamahasoa Christine, talohan’ny nirosoana tamin’ny latsa-bato miafina, dia nanasongadina fa “ny tombontsoam-pirenena no iarahantsika mikatsaka ka amin’ny alalan’ny Antenimierampirenena ka hiezaka izahay ny tsy handrarahantsika ilo mby an-doha”. Navoitrany koa fa “nampanantena ny hanome fitaovana hahafahantsika miatrika amim-pitoniana ny asantsika solombava ny filohampirenena ka tazonintsika amin’ny teniny izy”. Horakoram-pihobiana no nasetrin’ny solombava nanerana ny Antenimierampuirenerna omaly satria avy hatrany ny niantefan’ny sain’ny maro, na solombava na olom-pirenena tsotra, dia hoe “fiara 4×4 no dikan’izany”.
Tsy nohadinoin-dRazanamahasoa Christine moa ny nampahatsiahy fa ankoatra ny maha-mpanao lalàna dia mpanara-maso ny asan’ny fitondram-panjakana koa ny solombava. Zary fanentanana ny solombava tsy hiahotrahotra amin’ny fanaraha-maso ny ataon’ny governemanta izany.
Dia manara-maso ny ho avy manomboka izao ny rehetra.
KOLO ANAKA : FAHIRATAN-TSAINA – FIERITRERETANA – FIHETSEHAM-PO (Fizarana 6)
MBS : Tsy nandoa hofantrano tao anatin’ny 10 taona
Politika : Demôkrasia inona no tadiavin’ny mpanohitra
Taham-pahasitranan’ny Covid-19 : Azo ambara ho tsara toerana i Madagasikara
Fiangonana zandriny : Hanangana fikambanana toa ny FFKM ?
Ravalo : Mpanohitra fa tsy mpanao politika
Ambohipo : ho tapaka ny lalàna eo Andohan’i Mandroseza
Vatsy tsinjo : Tandremo tsy hanao « caisse vanille »
Vahaolana ara-tsosialy : Avereno ny kaoperativa
Tanànan’Antananarivo : Aza mandrava efa sy mandoro vola re !